Imbono Ka-Aristotle Ngendalo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChiyao IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
KWIMINYAKA engaphezu kwe-2 300 eyadlulayo, uAristotle wadlala indima enkulu kwisayensi nentanda-bulumko. Izinto awazibhalayo zisathandwa kakhulu kwaye ziye zaguqulelwa zaza zahlolisiswa. UProfesa wembali, uJames MacLachlan, wabhala wathi “indlela uAristotle awayibona ngayo indalo iye yathandwa kakhulu eYurophu phantse iminyaka eyi-2 000.” Ezinye zeendlela awayebona ngazo izinto ziye zangena kwiimfundiso zamaKatolika, amaProtestanti namaSilamsi.
Izinto Awayezithanda Zazininzi
UAristotle wabhala ngezobugcisa, iinkwenkwezi, ibhayoloji, indlela yokuziphatha, iilwimi, umthetho, indlela abantu abacinga ngayo, amandla eemagnethi, inzululwazi, ukuzonwabisa, imibongo, ukusebenza kwengqondo, ubuciko bokuthetha kunye nomphefumlo, awayekholelwa ukuba uyafa. Kodwa waziwa kakhulu ngezinto awazibhalayo ngebhayoloji nendlela abantu abacinga ngayo.
Abaphengululi abangamaGrike bamandulo babexhomekeke kakhulu ekubukeleni, ekubaleni nakwindlela abantu abacinga ngayo ukuze bacacise indalo. Babekholelwa ukuba banokufikelela kwizigqibo ezifanelekileyo ngezinto xa benokucingisisa kakuhle ngezinto abathi zizicacele kwindalo.
Besebenzisa le ndlela yokucinga, bakwazi ukufikelela kwizigqibo ezivakalayo. Esinye sazo sesokuba kukho indlela ethile yokwenza izinto kwindalo yonke. Sekunjalo, abantu abaninzi abakrelekrele njengoAristotle baphambuka kuba babebona kuphela oko kuphambi kwamehlo abo. Ngokomzekelo, babekholelwa ukuba ezinye iiplanethi neenkwenkwezi zijikeleza umhlaba. Ngelo xesha, kwakusithiwa le yinyaniso engenakuphikiswa. Incwadi ethi The Closing of the Western Mind ithi, “Indlela ezaziqondwa ngayo izinto nokuhamba kwexesha, zonke zazibonakala zikungqina oko kuthethwa ngamaGrike ngendalo ejikeleza umhlaba.”
Le ndlela iphosakeleyo yokubona izinto yayingayi kuba yingxaki kangako ukuba yahlala iyindlela yokucinga yoososayensi. Kodwa zange kube njalo.
AmaKatolika Amkela Iimfundiso Zika-Aristotle
Ezinye zeemfundiso zika-Aristotle zamkelwa ngabo babezibiza ngokuba ngamaKristu aseYoruphu amandulo, ecinga ukuba zichanile. Abefundisi abangamaRoma Katolika, ingakumbi uThomas Aquinas (owayephila malunga no-1224-1274), baxuba izinto azibhalileyo kwiimfundiso zabo. Ngenxa yoko, imbono ka-Aristotle yokuba indalo ijikeleza umhlaba yaba yimfundiso yamaKatolika. Le mfundiso yamkelwa naziinkokeli zamaProtestanti, njengoCalvin noLuther, zisithi yimfundiso yeBhayibhile.—Jonga ibhokisi ethi “ Babezibaxa Izinto Ezibhalwe EBhayibhileni.”
Ezinye zeemfundiso zika-Aristotle zamkelwa kuba kucingwa ukuba zichanile
Umbhali, uCharles Freeman wathi: “Iimfundiso [zika-Aristotle] nezamaKatolika kwakusele kunzima ukuzahlula.” Ngenxa yoko, kuthiwa uAquinas “wambhaptiza” uAristotle waba ngumKatolika. Ngokutsho kukaFreeman, inyaniso kukuba “uAquinas wamkela iimfundiso zika-Aristotle.” Ngokomkhamo othile, sinokuthi necawa yenza okufanayo. Ngenxa yoko xa wazama ukuza nobungqina bokuba umhlaba ujikeleza ilanga, uGalileo, isazi ngeenkwenkwezi nezibalo saseItaly, wanyanzelwa yicawa yamaKatolika ukuba arhoxe kwimbono yakhe. * Kodwa ke, uAristotle yena wayeqonda ukuba ulwazi ngesayensi luyanda ibe kufuneka lumane luhlaziywa. Akwaba neecawa zazibona ngendlela efanayo!
^ isiqe. 11 Ukuze ufunde ngakumbi ngomxholo othi “UGalileo Uxabana Necawa,” jonga uVukani! wesiNgesi ka-Aprili 22, 2003.
UAristotle wayekuthanda ukufumana ulwazi, “wayeyihlonipha yaye eyixabisa indalo.”—Aristotle—A Very Short Introduction.
Wayekholelwa ukuba indalo “inoMntu” obangela ukuba isoloko ikho. Lo Mntu ulungile kwaye yena akaphili kuyo.
UAristotle kuthiwa nguye owaqala izifundo ngebhayoloji nendlela abantu abacinga ngayo.
Waqeqesha umfana waseMakedoni owathi kamva waba nobukhosi obukhulu, uAleksandire oMkhulu.
Abantu bamandulo abaninzi babekholelwa ukuba indalo ijikeleza umhlaba
Babezibaxa Izinto Ezibhalwe EBhayibhileni
Abanye abefundisi bamandulo babambelela kwimbono ka-Aristotle yokuba indalo ijikeleza umhlaba kuba babezibaxa ezinye iivesi zeBhayibhile ezifana neNdumiso 104:5. Ithi: “[UThixo] Useke umhlaba phezu kweendawo omiswe kuzo; awuyi kushukunyiswa ukusa kwixesha elingenammiselo.” Lo mbhali weBhayibhile wayengathethi ngendawo umhlaba omi kuyo kwindalo. Kunoko, ngokungathi ubhala umbongo, wayebonisa ukuba ngokwenjongo kaThixo umhlaba uya kuhlala ukho.—INtshumayeli 1:4.
Sekunjalo, xa iBhayibhile ithetha ngezinto zesayensi, isoloko ichanile. Ngokomzekelo, uYobhi 26:7, owabhalwa kwiminyaka emalunga ne-3 500 eyadlulayo, uthi uThixo “ihlabathi ulixhoma kokungento.” UYobhi 38:33 uthi amazulu alawulwa yimithetho yendalo.